RUGTA BADAN AYAA SAMEEYA: ADIGA OO RAACAYA TILMAAMAHA TALAABADA - BEEKEEPING
Nidaamkeeda, naqshadeynta rugta badan ee jirka ayaa aad u fudud, sidaas awgeed waxaa la isugu dari karaa qof aan wax fikrad ah ka qabin farshaxanimada. Qaab dhismeedka gudaha ee dhismaha waxaa ka mid ah waxyaalahan oo kale.:
mesh leh xoqid;
gelitaanka hoose iyo sare ee furan;
malab ah oo ay ku jiraan cuntada la shaabadeeyey, iyo sidoo kale unugyada madhan;
nus-guri leh meel bannaan oo bilaash ah.
Marka la isugu geeyo jirka qaybta jirka ah, fiiro gaar ah u dooro qalabka cayriin ee wax soo saarka.
Noocyada ugu fiican ee qoryaha waa geed, kedar iyo larch. Miisaanka looxyada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 35 mm.
Waa muhiim! Marka abuurista rugta ma isticmaalaan dhismayaasha birta. Qalabka noocan oo kale ah biraha wuxuu saameyn xun ku yeelan karaa xaaladda guud iyo horumarka qoyska shinni.
Xajmiga ugu fiicani wuxuu ka kooban yahay 435x230 mm. Waxaa ugu wanaagsan in la xoojiyo apiary oo kale oo ku takhasusay dabeecadaha dabiiciga ah ee beeska.
Sida caadiga ah duurjoogta, godadka geedka, halka cayayaanka caanaha ka samaysan rugta, waa qiyaastii 300 mm oo cabbirka. Daboolka waxaa laga samayn karaa taarikada saqafka yar. Si loo hubiyo kalsoonida ah ee isku-xirnaanta, walxaha waa inay ahaadaan kuwo si taxaddar leh u mira dhalaalaya.
Waxaa fiican inaad ka fogaato isticmaalka ciddiyaha birta. Naqshadeynta rinjiga, waxaad isticmaali kartaa weelasha yaryar ee lagu iibiyo dukaanka iyada oo alaabta loo kaydinayo kaydsiga.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad barato sida loo sameeyo rugta Dadan.
Tilaabooyinka talaabo tallaabo leh sawiro iyo qiyaaso
Xaqiijinta dhabta ah ee cabbirkan iyo isticmaalka qalabka tayada ee wax soo saarka ayaa fure u ah abuurista naqshad adag oo lagu kalsoonaan karo. Tiknoolajiyadda dhismaha ee rugta multihull, iyo sidoo kale noocyada kale ee finan, leedahay sifooyinka gaar ah. Waxay u baahan yihiin in si faahfaahsan loo tixgeliyo.
Ma taqaanaa? Kala-saaraha rugta casriga ah ee casriga ah waa rugta qaab-dhismeedka ah, oo lagu abuuray qarnigii sagaalaad ee beeraleyda American LL Langstrot. Ka dib ganacsade A. I. Ruth oo wax laga beddeley dhismahaan, rugta qallalku ma samaysay isbeddello halis ah waxaana hadda si ballaaran loo isticmaalo beekeepers.
Saldhigga saqafka wuxuu ka samaysan yahay kuraasta joogtada ah ee bixisa jilitaanka dhismaha oo dhan. Saqafku waa qaybta kaliya ee birta loo isticmaali karo. Sida caadiga ah, saqafku wuxuu ku duuban yahay biraha. Miisaanka looxyada saqafyada waa inay ahaadaan 25 mm. Tani waa dhumucda ugu fiicnaanta, taas oo, haddii loo baahdo, waxay u oggolaanaysaa isticmaalka suufka kulul.
Saqafku wuxuu si adag u xiran yahay si aan u jirin wax u dhaxeeya isaga iyo derbiyada.
Thanks to bees, qof kale oo aan malab sidoo kale wuxuu helaa manka, shinni shinni, wax, propolis, jelly boqornimo.
Sidoo kale saqafka waa lagama maarmaan in la sameeyo meelo dhowr ah oo loogu talagalay hawo-qaadashada. Tirada ugu fiican ee godadka sida - 4 xabbo.
Wixii soo saarista jirka wuxuu isticmaalay guddiyo adag. Inta lagu jiro goynta shaqada, waxaad u baahan tahay inaad qaadato kaalmo ah 2.5-3 mm dhinac kasta. Wixii ku wajahan, waxaad ka bixi kartaa gunno 10mm ah. Cabbirada qaybtan qeybta rugta dhawr ah waa inay ahaato sida soo socota:
Gadaasha iyo derbiyada hore - dhererka-465 mm, width-245 mm.
Darbiyada dhinaca - dhererka-540 mm, width 245 mm.
Sawirrada qodxista waa inay ahaadaan kuwo aad u taxaddar badan, oo toosan. Haddii si sax ah loo jabiyo inta lagu jiro kiiska kiiska, waxaa laga yaabaa inuu dhaco.
Baro sida loo isticmaalo warshadeynta wax lagu qurxiyo ee kaydsiga shinnida inaad adigu samayn karto.
Taasna, tani waxay dhalin kartaa in la gooyo dhabannada dhinacooda. Waa lagama maarmaan in la jarjaro meel ka baxsan, iyo meesha uu isha ku yaallo, gudaha gudaha. Taas ka dib, dhammaan khariidooyinka u dhexeeya sarreenka waxaa lagu baaraandegaa qashin si looga hortago qoryaha ka soocaya.
Ma taqaanaa? In lagu soo wareejiyo Roma qadiimiga ah waxaa lagu qeexay in qalabka dabiiciga ah oo keliya loo adeegsaday soo saaridda finan. Kuwani waxay ahaayeen: dhoobo la dubay, caws engegan, shukulaato, iyo xataa dhagax.
Dabadeed dhinaca derbiga waxaa lagu dhajiyaa mashiinka shaqada ee hoosta, iyo derbi leh dhoobo si loogu calaamadiyo indhaha ayaa ku yaal meel sare oo xagga sare ah. Cidhifyada hore waa inay noqdaan kuwo biyo raaciya. Horyaal kasta waxaa lagu sharaxay qalin, oo waxaa loo wareejin karaa guddiga si jiifa.
Waxaa lagugula talinayaa in aad ku calaamadiso gees walba gees ahaan nambarada si aadan ugu dhicin inta lagu jiro geedi socodka shirka. Kadib markaad calaamadeyso indhaha, khariidadu waxay ka saaraysaa dhammaan kharashka labada dhinacba.
Qaybta hore iyo kan dambe ee kiiska, laab laab ayaa loo sameeyaa rakibaadda xiga ee wareegyada. Qaybta sare ee dhinaca derbiga ah, derbiyada ayaa la saaraa width width 11 iyo qoto dheer oo ah 17 mm. Xuddunta ayaa la dhigayaa si ay geeskeeda sare ugu jirto 7 mm oo ka hooseeysa geeska kore ee kiiska - taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u kiciso kiis kale. Dhanka gudaha, derbiyada ayaa lagu jajabiyaa oo lagu qasaa.
Ku aadida kiiska sidaas: derbi leh lugs ah ayaa la dhigaa goobta shaqada, iyo derbi leh dhoobo ayaa la dhigayaa dusha sare. Dhaawacyada iftiinka qafiifka ah ee duufaanka ayaa indhaha lagu riixaa. Si looga hortago waxyeelo soo gaarto, waxay ku dhejin karaan qoryo alwaax ah oo garaacaan.
Waa muhiim! Marka ay kiisku kicinayaan, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo qoryaha alwaax ka samaysan alwaax.
Si sahlan u qaadista jirka ee derbi kasta oo ka mid ah rugta waxaad u baahan tahay inaad sameyso qolof (gacmaha oo ah qaabka nasashada). Waxaa fiican inaad dejiso dareeraha 70 mm ka hooseeya geeska sare ee jidhka, udhow bartamaha derbiga.
Qeybta hoose waa in ay ahaato laba laaban oo laga saari karo. Si sahlanaanta loo abuuro qaybtan qeybta jilicsan ee jirka ah, waxaad sawiri kartaa sawirro muuqaal ah.
Sidaas darteed, si aad u abuurto qaab hoose waxaad u baahan tahay inaad qaadato 3 baarar:
Laba qaybood dhinaca. Cabbirka - 570x65x35 mm.
Gawaarida. Cabbirka - 445x65x35 mm.
Laga soo bilaabo gudaha gudaha hoose ee baararka waxaad u baahan tahay inaad sameysid jeexdin. Dib u soo celinta geeska ugu sareeya 20 mm, waxaad u baahan tahay inaad kor u qaaddo jeexdin leh qoto dheer 10 iyo width 35 mm. Ka dibna waxaa la gelin doonaa qaybta hoose ee rugta jirka ah.
Si loo abuuro shuruudo wanaagsan oo shinni ah si loo abuuro loona abuuro malab delicious ah, ka akhri sidii aad u samaysan lahayd beehive leh gacmahaaga.
Qeybta hoose iyo qaabka waxaa lagu dhejiyaa nidaamka "jeex - qodax". Naqshadani waxay leedahay shax saddex dhinac ah, dhinaca afaraadna waxay leedahay 20 mitir oo sare. Ujeedada farqigaas waa in la siiyo isbeddel hawada ah. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la sameeyo meel u taalla rugta, taas oo fududeyn doonta gaadiidka gurigga shinni iyada oo loo marayo apiary. Intaa waxaa dheer, naqshadani waxay ka caawisaa in laga fogaado xiriir toos ah ee rugta leh dhulka dushiisa.
Waa muhiim! Beekeepers ma talinayso in la saaro rugta si toos ah dhulka, sida kiiskan, heerkulka xagaaga sare iyo hargabka daran ee jiilaalka ayaa saameyn xun ku yeelan kara beeska.
Markaad dhiseyso guri bee ah, raac tilmaamahan:
Ka taxaddar inaad horey u kuleylid. Waagii hore, beekeepers ayaa la qalajiyey qalajiyo dhogor, laakiin maanta waxaa jira qalab aad u habboon loogu talagalay, tusaale ahaan, xumbada leh polystyrene.
Qalabaynta qalabka lagu gooyo qaybaha iyo shaqada kale.. Waxaad u baahan doontaa jilbaha, sawir, mindiyaha qalabka iyo rukummada loogu talagalay qurxinta gudaha.
Qeyb kasta waa in si habboon loo qorsheeyo., dusha sare waa in aan la xoqin, jajabyo iyo sharaf.
Qeybta waa inaysan ku jirin aag furan.. Laakiin haddii aysan jirin meel kale, markaa waa lagama maarmaan in la bixiyo shaabad wanaagsan oo leh caawimo gaashaan ama kaarar alwaax ah. Tani waxay yaraynaysaa khatarta ah in ay kulaylka ka yimaaddo cayayaanka cayayaanka.
Faa'iidooyinka ka mid ah rugta Multiple
Khabiirada beerta beekeeping Mannapov AG iyo L. Khoruzhiy oo ku jira buugooda "Teknoloojiyada wax soo saarka shinnida alaabada sida waafaqsan shuruucda heerarka dabiiciga ah" waxay muujineysaa xaqiiqo xiiso leh.
Daraasadaha mudada dheer waxay ogaadeen in gumeysiga shinni ee ku nool hareeraha kala duwan uu siinayaa 30% carruur farabadan marka la barbar dhigo beeska laga soo qaato laba xabbo oo caarad ah. Marka laga reebo xaqiiqda ah in naqshadda qayb ka mid ah ay dhigto 2 jeer shinni, waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
Wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku hayso qaybta sare ee heerkulka, si fiican u caleen.
Shinniisha boqoradda waxaa la siiyaa unugyo tiro badan si ay ukumo ugu dhigto qaybaha ugu haboon ee rugta.
Frames waa la dhisi karaa si dhakhso badan.
Waxaa suurtagal ah in la isticmaalo wax soo saaraha malab yar yar oo aan dhicin malabkii.
Xawaaraha sare iyo sahlan ee dayactirka rugta, xakamaynta heerka nadaafadda;
Ma taqaanaa? Shinbir shimbiruhu ma heli karo rugta qof kale. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in rugta kasta ay leedahay ur aan caadi aheyn oo aan la qabin nin. Shinni kasta wuxuu leeyahay urtaas qoto dheer ee jidhka. Duufaan ilaa qiiqa, shinni ayaa furfuraya niyadjabkan, oo urta u keenaya ilaaliyeyaasha sida nooca baaskiilka.
Qalabka Multicase - waa nooc kale oo wanaagsan ee rugta caadiga ah. Waad ku mahadsan tahay xajmigeeda xajmiga ah, waxaad ku gaari kartaa saameyn ugu badnaan qiimaha hooseeya.